Dhimashada - InfoFinland
Nolosha Finland > Xaaladaha dhibka > Dhimashada
Haddii uu qof ku dhinto meel isbitaalka ka baxsan, tusaale ahaan gurigiisa waa in booliska ama dhakhtarka degdeg loogu wargeliyaa. Wac lambarka xaaladaha degdegga ah 112. Booliska ayaa sameynaya baaritaanka sababta dhimashada, macluumaadka dhimashada ku saabsanna u gudbinaya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Marka uu qofku ku dhinto isbitaalka ama xarunta daryeelka, shaqaalaha ayaa dhimashada ku wargelinaya nidaamka macluumaadka dadka. Macluumaadka dhimashada ku saabsan waxaa sidoo kale si otomaatig u helaya Kelada, hay’adda hawlgabka iyo bangiyada.
Ehelka marxuumku waa in ay dhimashada ku wargeliyaan shaqa bixiyihiisi, shirkadda guriga, cidda guriga laga kireystay, boostada iyo shirkadaha caymiska. Wargelinta waa in sidoo kale loo diraa saraakiisha dawladda ee dalka uu marxuumku ka soo jeedo, haddii tusaale ahaan uu dibadda ka qaadan jiray lacagta hawlgabka.
Liiska xusuusqorka ee ehelka qofka dhintayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Caawimaadda iyo taageerada
Marka uu qofka ehelkaada ah dhinto, waxaad murugada caawimaad iyo taageero uga heli kartaa rugaha caafimaadka, rugaha talinta qoyska, adeegga xasaradda dadka ajnabiga ah ee Ururka caafimaadka dhimirka ee Finland iyo xer-diimeedyada. Caawimaad waxaa lagu helaa luqada Finnishka, Iswiidhishka iyo deegaanno badan oo iyaga af Ingiriisna looga helo. Haddii aad u baahantahay waxaad isticmaali kartaa turjubaan. Waxaa suurragal ah in dhimashada ehelka ka dib shaqada laga helo fasaxa jirrada oo gaaban.
Macluumaad ku saabsan xaaladda xasaradda iyo murugadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Carabi
Oggolaanshaha aaska iyo caddaynta dhimashada
Si qofka ehelka ah ee dhintay loo aaso, waxaa loo baahan yahay oggolaanshaha aaska. Xafiiska aaska ayaa keenaya oggolaanshaha aaska. Si kastaba ha ahaatee ehelku waa ay sii qabanqaabin karaan aaska ka hor inta aan oggolaanshaha aaska la qorin.
Oggolaanshaha aasku waa qayb ka mid ah caddaynta dhimashada. Caddaynta dhimashada waa loo baahan yahay, haddii marxuumku uu ku jiray caymiska nolosha shirkadda caymiskuna ay sababta dhimashada su’aasho. Ehelku waxay shahaadada dhimashada ka codsan karaan dhakhtarka marxuumka daaweynayay. Haddii uu boolisku baaray sababta dhimashada, booliska ayaa markaas caddaynta dhimashada laga codsan karaa.
Muwaadinka waddan shisheeye u dhashay ee ku dhintay Finland
Marka uu muwaadin waddan kale u dhashay Finland ku dhinto, sababta dhimashada waxaa loo baarayaa si waafaqsan sharciga Finland. Baaritaanka marka la sameeyo ayuu boolisku nuqulka dukumentiga baaritaanka u dirayaa safaaradda dalka uu marxuumku ka soo jeedo. Safaaradda ayaa dhimashada ku wargelinaysa saraakiisha dawladda ee dalka uu marxuumku ka soo jeedo.
Dukumentiyada sababta dhimashada waxaa la dirayaa iyagoo ku qoran afka Finnishka ama Iswiidhishka. Haddii la doonayo in dukumentiga lagu helo luqado kale, ehelka ayaa baxsanaya lacagta turjumaadda. Safaaraddu waxay ehelka ka caawin kartaa helitaanka caddaynta dhimashada ama baaritaanka sababta dhimashada.
Ehelku iskood ayeey aaska u qabanqaabsan karaan ama waxay adeegga aaska oo dhan ama qayb ah ka iibsan karaan xafiiska aaska. Oggolaanshaha aaska waxaa la siinayaa qofka mas’uulka ka ah qaadista marxuumka. Xigtadu waxay safaaradda ka codsan karaan talooyinka qabanqaabada arrimahaas la xiriira.
Haddii aysan xigtada marxuumku qaban hawsha aaska, gubista meydkiisa ama u qaadista dalkiisi, waxay safaaraddu la xiriiri kartaa saraakiisha deegaanka. Marxuumka waxaa markaas loo aasayaa ama loo gubayaa meydkiisa si nidaamka Finnishka waafaqsan.
Safaaradda waddanka uu marxuumku ka soo jeedo ayaa la weydiin karaa talooyinka ku saabsan arrimaha dhimashada.
Wakiilada wadamada kale ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Aaska Finland ka dhaca
Qabanqaabinta aaska waxaa caawimaad looga heli karaa jimciyada diinta. Weydii faahfaahinta arrintaas jimciyaddaada. Bogagga kaniisadda Luteraanka ee Finland ayaa ka heleysaa macluumaadka adeegyada kaniisadda. Waxaa sidoo kale suurragal ah in la sameeyo aas madaniga ah oo aysan arrimo diimeed laheyd. Xafiisyada aaska ayaa ka talabixiya adeegyada jira oo dhan. Macluumaadka ku saabsan aaska madaniga ah waxaa sidoo kale laga helaa xarunta adeegga Pro-Seremoniat.
Adeegyada xafiiska aasku waa lacag. Waxay qabtaa qabanqaabada aaska sida qaadista maydka. Xafiisyada aasku waxaa ay sidoo kale iibiyaan naxashka ama sanduuqa meydka waxayna sidoo kale heshiis ku qabtaan dhammaan waxyaabaha kale ee aaska la xiriira oo ay xigta marxuumku ka codsadaan. Macluumaadka ku saabsan xafiisyada aaska waxaad ka heleysaa tusaale ahaan Ururka Xafiisyada aaska ee Finland. Xafiisyo aas oo badan ayaa waxaa sidoo kale laga helaa adeegyo ku baxa luqadda Ingiriiska.
Aaska shacabkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macluumaad ku saabsan aaska kaniisadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ku dhowaad dhammaan Qabuuraha Finland waxaa iska leh xer-diimeedyada kaniisadda luteraanka, laakiin god qabri waa laga heli karaa, xittaa haddii aan laga tirsaneyn kaniisadda luteraanka. Godadka qabrigu waa lacag waxaana wax laga weydiin karaa xer-diimeedyada. Haddii uusan qofku kaniisadda ka tirsaneyn islamarkaasna uusan dooneyn aas diimeed, looguma sameynayo. Marxuumka waxaa lagu aasi karaa naxashka ama sanduuqa ama meydkiisa waa la gubi karaa. Degmooyin badan ayaa waxaa ku yaal qabuuraha dadka diimaha kale haysta. Tusaale ahaan Qabuuraha Ortodhoksiga, Yuhuudda iyo Muslimiinta ayaa laga helaa magaalooyinka waaweyn. Degmooyin badan ayaa waxaa sidoo kale laga helaa aag qabuuro ah oo lagu aaso dadka wax diin ah haysan. Dambasta marxuumka waxaa sidoo kale lagu bitin karaa bey’adda ama biyaha socda, haddii uu milkiilaha goobahaas uu oggolaado.
Mararka qaar wuxuu qofka dhintay xaq u yeelan karaa caawimaadda aaska oo ku saleysan xiriirkiisa shaqo ee ugu dambeeyay ama xubinnimadiisa ururka shaqaalaha. Weydii arrintan shaqa bixiyihiisa u dambeeyay ama ururka shaqaalaha. Kharashka aaska marxuumka saboolka ah waxaa Kelada ama xafiiska sooshalka (sosiaalitoimisto) degmada looga codsan karaa kaalmada dhaqaalaha nolosha.
Hawlgabka qoyska (perhe-eläke) waxaa dhimashada qofka kaddib la siin karaa lammaanihiisa iyo carruurtiisa. Ujeeddada hawlgabka qoysku waa in la sugo dhaqaalaha nolosha ee lammaanaha laga dhintay iyo carruurta. Finland waxaa ka jirta labo hawlgabka qoyska ah, hawlgabka qoyska ee Kelada iyo hawlgabka qoyska ee nidaamka hawlgabka shaqada. Haddii uu qofka dhintay Finland ka shaqeynayay ama uu ganacsade ka ahaa, lammaanaha uu ka dhintay iyo carruurtiisuba waxay heli karaan hawlgabka qoyska oo waafaqsan nidaamka hawlgabka shaqada. Labada hawlgab waxaa laga codsan karaa Kelada.
Haddii uu qofku muddo dheer ka shaqeynayay waddan kale ka hor inti uusan Finland u soo guurin, waxaa laga yabaa in lammaanaha iyo carruurtu ay xaq u leeyihiin in ay waddankaas ka helaan hawlgabka qoyska. Ka gungaar shuruudaha Finland ama waddanka laga yimid loogu heli karo hawgabka qoyska.
Macluumaad ku saabsan hawlgabka qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Sharciga ayaa qoraya qofka dhaxalaya hantida qofka dhintay. Saameyn ayaad sidoo kale ku yeelan kartaa dadka hantidaada loo qaybinayo. Waxad qori kartaa dardaaran (testamentti), yacni caddayn qoraal ah oo ay ku caddahay cidda dhimashadaada ka dib hantidaada dhaxlaysa. Dardaaranka waa in ay ku jiraan arrimo la ogyahay, waana in ay mar kasta ku qoran yihiin saxiixa labo marqaati oo sharci arrintan ka xannibaya uusan jirin. Haddii kale dardaaranku ma noqonayo mid sharci ah. Waxaa wanaagsan in la isticmaalo adeegga sharciyaqaanka, marka aad dardaaran qoreyso.
Qorista liiska dhaxalka
Qoraalka liiska dhaxalku waa caddaynta hantida iyo deynta qofka dhintay. Qoraalka liiska dhaxalka waa in lagu sameeyaa saddex bilood gudohood ka billaabanaysa wakhtiga dhimashada. Haddii aan wakhti hore la sameyn qoraalka liiska dhaxalka, waxaa ka dhalan karta dhibaato, sida canshuurta dhaxalka oo la kororta.
Sameynta qoraalka liiska dhaxalku wuxuu u baahan yahay caddayn xiriirka qoyska ee marxuumka oo laga soo billaabayo 15 sano jirkiisi illaa iyo dhimashadiisa. Waxaa kale oo loo baahan yahay caddaymaha rasmiga ah oo aad ka helayso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama xer-diimeedka. Waxaa kale oo baahan yahay macluumaadka dadka hantida marxuumka dhaxlaya. Waxaa dadkan loogu yeeraa dadka dhaxalka xaqa u leh.
Qoraalka liiska dhaxalka waxaa qabanqaabinayaa qofka ugu aqoob badan hantida iyo deynta qofka dhintay. Waxaa wanaagsan in sameynta qoraalka liiska dhaxalka loo isticmaalo qareen ama qof arrintaas aqoon u leh.
Qoraalka liiska dhaxalka waxaa saxiixaya qofka dhaxalka wargelinta dhaxalka sameynaya iyo dadka dhaxalka leh ee madasha jooga. Waxaa kale oo taas la jirta in labo nin oo lagu kalsoon yahay ay saxiixaan, kuwaas oo qiimeynaya hantida marxuumka. Liiska dhaxalka waa in xafiiska canshuuraha loo gudbiyaa ugu dambeyn lix bilood gudohood oo ka billaabanaysa munaasabadda qoraalka liiska dhaxalka.
Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan qoraalka liiska dhaxalka waxaad ka heleysa waaxda garsooka iyo maamulka canshuuraha. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo qoraalka liiska dhaxalka, xafiisyada aaska ayaa xittaa arrinkan dadka ka caawiya.
Haddii aad dhaxasho qof dhintay hantidiis, waa inaad bixiso canshuurta dhaxalka. Caddadka canshuurtu wuxuu ku xiran yahay inta ay dhantahay hantida aad marxuumka ka dhaxashay, iyo dhalasho ahaan sida aad isugu dhowdihiin. Looma baahna in canshuur laga bixiyo dhaxal ka yar 20 000 oo yuuro.
Macluumaad ku saabsan qorista dardaarankaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macluumaad ku saabsan canshuurta dhaxalkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dhimashada iyo sharciga degenaanshaha
Haddi aad heysato sharciga degenaanshaha oo ku meelgaar ah, kaas oo laguugu siiyay xiriir qoys, dhimashada xigtadaadu waxay saameyn ku yeelan kartaa sharciga degenaanshaha. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 31.08.2021 Boggan war-celin ka soo dir